Ny andian-teny latina hoe Soli Deo gloria, izay adika amin'ny teny malagasy hoe "an'Andriamanitra irery ny voninahitra" dia iray amin'ireo ainga fototry ny fivavahana kristiana noraisin'ireo teolojiana protestanta, ka isan'ireo andian-teny latina noraisina ho teny filamatra miisa dimy. Izany dia midika fa Andriamanitra irery ihany no masina, manana ny fomba maha Andriamanitra azy fara tampony. Noho izany, tsy misy ezaka na asan'olombelona afaka hihambo hanana toetra fara tampony sy tsy azo ovana na sahaza ho an'ny olona sy ny zavatra rehetra, isan'izany ny teolojia. Ankoatra izany, ny fanomezan'Andriamanitra fahalalahana ny olombelona dia mahatonga ny Protestanta hankasitraka ny rafi-piarahamonina mandala ny fahasamihafana sy ny fahalalahana.
Avy ao amin'ny Epistily voalohany ho an'i Timoty (1Tim. 1.17) sy ny Epistily nosoratan'i Joda (Joda 1.25) ao amin'ny dikan-teny latinan'ny Baiboly atao hoe Volgata (latina: Vulgata) ny andian-teny hoe "Soli Deo gloria".
Tsy tokony hisy ny fanompoam-pivavahana atao amin'olombelona na aiza na aiza, na maty na velona; tsy tokony hisy fanompoam-pivavahana atao amin-javatra hafa, na amin'ny sary, tanterahin'ny Protestanta. Ny mofo sy ny divay, izay misolo ny vatana sy ny ran'i Kristy ao amin'ny fanasan'ny Tompo dia tsy anaovana fanompoana na fitsaohana. Rehefa mamerina ny fahatsiarovana an'i Kristy sady miaiky ny fanatrehany ny mpino, dia samy fanomezan'Andriamanitra ny mofo sy ny divay, sahala amin'ny zavatra hafa rehetra. Tsy ivavahana ny Baiboly na dia mihaino ny famakiana azy amin-pifantohana aza ny mpino.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Soli_Deo_gloria&oldid=973832"
Dernière modification le 3 Septambra 2019, à 14:06
Voaova farany tamin'ny 3 Septambra 2019 amin'ny 14:06 ity pejy ity.